1.3.3 Iyyatoo PDF
3.5 Sadarkaawwan toorbarruu maraa
3.5.1 Sadarkaalee toorbarruu mul'atoo
Fuulawwan saanduqa keessatti barreessitu aleerga.
Yoo qabsiifame, fuulawwan bakka duusaagaman gara faayilii PDFtti aleergamu. Yoo ati faayilii PDF cinaa lamaan maxxansitu kuni gaarii dha. Fakkeenya: keeyyata boqonnaa barruu keessatti haalatni yeroo mara fuulaa lakkoofsa qaraatiin jalqaba. Boqonni duraani fuula qaraarratti xumurama. LibreOffice fuula bakka duuwwaa lakkoofsa guutuun saaga. Dirqalli kun fuula lakkoofsa guutuu aleerguu ykn dhiisa.
Retrieved from "https://help.libreoffice.org/index.php?title=4.3/Common/Export_as_PDF/om&oldid=800340"
This page was last edited 16:18:16, 2014-10-03 by LibreOffice Help user WikiSysop.